Ikusasa lowo-Suthu lilele ezingxoxweni nabaphathi – Journalismiziko
Home›Sport›Ikusasa lowo-Suthu lilele ezingxoxweni nabaphathi
Iqembu lamaZulu lilindekele ukuba lenze izinguquko kubaqeshi njengoba kuzo qhubeka imidlalo yeligi ka 2019/20. Kuze kube imanje asikaphumi isinqumo esiqondile ngekusasa lo mqeqeshi wamaZulu osamisiwe ekuqeqesheni u-Jozef Vukusic, obeku lindelwe ukuthi kuphume isinqumo ngoLwesibili.
U-Vukusic wahoxiswa ngo-Mashi okwesikhashana njengo mqeqeshi waleli qembu kwase kuqokwa u-Ayanda Dlamini njenge bamba lomqeqeshi wamaZulu.
Ngoko mbiko we KickOff.com ikuqinisekisile ukuthi ithimba labaphathi beqembu babe no mhlangano no Vukusic ukudingida kabanzi ngekusasa lakhe kanye nokuphuma kwesinqumo esifanele ngokumiswa ekusebenzeni.
“Isinqumo esifanele asikakacaci kahle, njengoba wazi ukuthi lolu daba lusingethwe yithimba eliphethe iqembu kanti isinqumo asika menyezelwa,” kusho u-Brilliant Mkhathini obhekelele abezindaba kuleli qembu.
Nga phandle Kwa Vukusic okungacaci ngekusasa lakhe, iqembu lamaZulu likuqinisekisile ukuthi u Moeneeb Joseph akazebuyela ekuzilolongeni neqembu ngenxa yokuphela kwe nkontileka yakhe. Isinqumo ngekusasa lika-Josephs njengo sekela mqeqeshi sizophuma emva komhlangano wethimba labaphathi.
“UJosephs ngeke alule inkontileka yakhe njengo mdlali, kodwa ikusasa lakhe naleli qembu lizokwaziwa kahle mase kuphele izingxoxo ezikhona,”kwengeza uMkhathini.
Kulindeleke ukuthi iqembu lamaZulu liqinisekise ukukhulula abadlali okungu Nhlanhla Vilakazi no Michael Morton njengoba kuphela izinkontileka zabo.
Omunye umdlali okungu Thembela Sikhakhane owaye bolekwe kwi Orlando Pirates, engase abe sethubeni lokuthola isivumelwano esihle naleli qembu njengoba inkontileka yakhe ibiphela kwezika magebhula.
Salons, tattoo parlours geared up for the ...